dayniile » Sawirro:-Soomaaliya Oo Yeelaneysa Xaruntii Ugu Horreysay Ee Is-weydaarsiga Internet-ka (IXP)
Wakiillo ka kala socda shirkadaha isgaarsiinta, internetka, dalladaha jaamacadaha, xirfadleyda teknoolojiyada, iyo dawladda, ayaa sheegay in ay baahi weyn u qabaan inay ku soo biiraan IXPs.
Muddada uu socdo aqoon-is-weydaarsigan waxay wakiilladu ka doodi doonaan qaabka ugu wanaagsan ee xaruntan loo maamuli karo, iyagoo ugu dambeynta sameyn doona guddi ku-meel-gaar ah oo maamula xaruntan.
Wasiirka Boostada, Isgaarsiinta & Teknoolojiyada, Mudane Eng. Cabdi Cashuur Xasan, oo furay aqoon-is-weydaarsigan, ayaa in dhismaha MogIX uu ka mid ah yahay qorshayaasha ay Wasaaraddu ku dhiseyso kaabayaasha isgaarsiinta dalka, isla markaana uu wax weyn ku soo kordhin doono isgaarsiinta iyo teknoolojiyada dalka.
Dhinaca kale Wasiirka ayaa uga mahad celiyay Bankiga Adduunka iyo Hay’adda PCH gacanta ay Wasaaradda ku siinayaan dhismaha xaruntan.
“Wasaaraddu way awoodday in qalabkan lagu rakibo dhismaha Wasaaradda oo maamulkeeda aan 100% hayno, shirkadahana aan u sheegno inay ku soo xirmaan. Laakiin waxaan dooneynaa inay noqoto adeeg la wada leeyahay oo yaalla meel dhexdhexaad ah oo la wada horumariyo.
Sida la ogyahay Wada-tashi iyo kalsooni ayaan ku xaqiijinay waxyaabihii noo qabsoomay 12kii bilood ee la soo dhaafay, jidkaas ayaana ku sii soconeynaa,” ayuu yiri wasiirka oo intaasi ku daray in wasaaraddu soo dhoweyn doonto talooyinka ka soo bixi doona aqoon-is-weydaarsigan.
Wasaaradda ayaa ku guuleysatay ansixinta sharciga isgaarsiinta, dhismaha Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka iyo la-soo-wareegidda astaanta qaranka (dotSO). Dhismaha xaruntana wuxuu hordhac u yahay dhismaha kaabayaasha isgaarsiinta dalka oo u furan shirkadaha oo dhan.